भारतीय फ्यानलाई कसरि फेस गर्ने ? बर्षालाई लक्षित गर्दै नायिका निता ढुंगानाको कडा जवाफ, के-के भनिन ? — Sanchar Kendra
भारतीय फ्यानलाई कसरि फेस गर्ने ? बर्षालाई लक्षित गर्दै नायिका निता ढुंगानाको कडा जवाफ, के-के भनिन ?
काठमाडौँ । आइतबार बिहानैदेखि दिनभरी सामाजिक सञ्जालमा एउटा विषयले निकै चर्चा पायो जुन थियो भारतीय अतिक्रमणबिरुद्ध सिङ्गो देश एक भएका बेला बर्षा राउतले दिएको निक्कै नै बिबादित अभिव्यक्ति । उनले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विषयमा भारतसंग नेपालले टक्कर लिँदा आफुलाई अप्ठायारो भएको र देशका पत्रकारहरुले यसलाइ झगडा बनाउदा मैले मेरा भारतीय साथीहरुसंग कसरी फेस् गर्ने र भारतीय मेरा साथीले मसंग कसरी फेस् गर्ने ? भन्दै प्रतिक्रिया दिएपछि सामाजिक सञ्जालमा व्यापक बिरोध भयो।
यति मात्र हैन बर्षालाई सामाजिक सञ्जालबाटै बहिष्कार गर्ने अभियान समेत चलाउनु पर्ने भन्दै युवावर्गले सामाजिक सञ्जालका बिभिन्न माध्यमबाट आक्रोश पोखिरहेका छन् भने, कतिले त बर्षालाई टिकटके कलाकारको संज्ञा समेत दिन भ्याएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा चौतर्फी चर्को आलोचना भएको २४ घण्टा नबित्दै सार्बजनिक रुपमा माफी मागे पनि राष्ट्रियताकाे विषयलाई मजाक सम्झेको भन्दै समर्थकहरु झनै भड्किएका छन् ।
नेपाल र भारतबीचको सिमा बिबाद उत्कर्षमा पुगेका बेला बर्षाको बिबादित अभिव्यक्तिले सामाजिक सञ्जालमा छुट्टै तरंग छाएका बेला यता नायिका निता ढुंगानाले बर्षालाई लक्षित गर्दै नायिका नीता ढुंगानाले अहिले देशमा विभिन्न खालको समस्या उत्पन्न भइरहेको बताएकी छिन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा करिब ४७ मिनेट आफ्नो भनाइ राख्ने क्रममा उनले सबैभन्दा पहिले मानिसले आफ्नो राष्ट्रियताको विषयमा सोच्नुपर्ने बताएकी छिन् ।
नीताले भनेकी छिन्- ‘सबैभन्दा पहिले मैले राष्ट्रियतालाई राख्नुपर्छ । अनि मात्र परिवार, साथीभाइ आउँछन् । तर, पहिलो प्राथमिकतामा राष्ट्रियतालाई राख्नुपर्छ । राष्ट्रलाई समस्या परेको बेलामा सो बारे हामीले अवलोकन गर्नु जरुरी छ ।’ उनले, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले व्यक्त गरेको आत्मविश्वासलाई सलाम गर्न चाहेको पनि बताएकी छिन् । प्रधानमन्त्रीले बोलिसकेपछि आफूहरूले पनि बोल्न सजिलो भएको उनको तर्क छ ।
त्यस्तै अर्की नेपाली कलाकार रिमा विश्वकर्मा घुमाउरो शैलीमा राउतको नामै नलेखि उनको बचाउ गरेकी छिन । “जिरो टोलरेन्स” नामक गुप्रमा स्टाटस लेख्दै उनले राउतकाे बचाउ गरेकी हुन् ।
‘हैन, कस्तो समाजमा हुर्किदै छौं हामी !! कति बेला कसले के गल्ती गर्छ र उसमाथि खनिउ भनेर बसे जस्तो । आफ्नाले आफ्नालाई चाँही जेभन्दा पनि हुने अनि अर्काले भन्दा चाँही राष्ट्रवादी अपमानको नारा लगाउने ? स्मरण रहोस हामी मानव हौं । यहाँ कोहि पनि पुर्ण र दक्ष छैन ।’ उनले लेखिन – ‘शब्द केलाउने होइन आशय, आचरण र अभिव्यक्तिको मनसाय बुझ्ने प्रयास गरौ । भुलचुक भएका र नजानेकालाई सिकाऔं, सभ्य समाजको निर्माणमा जुटौं। ”
स्मरणरहोस यी रिमा बिश्वकर्मा तिनै कलाकार हुन जसले केहिदिन अघि मात्रै ‘लकडाउनका बेला बनाउन सिकियो’ भन्दै सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेपछि ट्रोलको सिकार हुनु परेको थियो । यस्तो छ वर्षा राउतले माफी माग्दै लेखेको स्टाटस…
जय नेपाल, जय नेपाली ! जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपी गरियसि”